Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0313 lak
Fialofana amin'ny androm-pahoriana
Alakamisy 18 Apr
Ampitahain’ireo mpaminany ao amin’ny Baiboly amin’ny fieron’ny liona ny fitsaran’Andriamanitra ho avy, dia feo mampihorohoro ny rehetra (Joe. 4:16; Amô. 1:2; 3:8). Ao amin’ny Baiboly, Ziona dia manondro ny toerana misy ny seza fiandrianan’Andriamanitra eto an-tany izay ao Jerosalema. Avy eo amin’io toerana io no hamaizan’i Jehôvah ny fahavalo ary koa hanomezany rariny ny olony izay miandry amim-paharetana ny fandreseny. Hiombom-pandresena Aminy izy ireo rehefa hanavao ny famoronana Izy.
Sarotra ho an’ny olona sasany ny mahatakatra ny fanoritsoritan’ny Soratra Masina ny fitsarana farany ataon’Andriamanitra. Tsara ny mihazona ao an-tsaina mandrakariva fa tena misy tokoa ny ratsy sy ny ota ary mahery vaika tokoa ny herin’izy ireo eo am-piezahana hanohitra an’Andriamanitra sy hamono izay mety ho endri-piainana rehetra. Fahavalon’ny faharatsiana Andriamanitra. Izany no mahatonga ny tenin’i Joela mitaona antsika handinika ny fiainantsika mba ho azontsika antoka fa miandany amin’Andriamanitra isika ka ho voaaro amin’ny andro fitsarana.
Vakio ny Mat. 10:28-31. Ahoana no anampian’ireo andininy ireo antsika hahafantatra izay zavatra efa nomena antsika ao amin’i Jesôsy, na dia ao anatin’ny fotoana mampahory indrindra aza?
Manohana ireo olona izay maharitra amin’ny finoana ny Tompo. Mety hitondra fahoriam-be eo amin’ny tany Izy (Joe. 4:1-15); kanefa tsy tokony hatahotra ireo asa fitsarana fara-tampony ataony ny olony satria efa nanome toky Izy fa hiaro azy ireo (and. 16). Efa nanome teny feno toky azy ireo Izy. Ireo asa fanapahany feno fahasoavana dia mampiseho fa Andriamanitry ny fanekena mahatoky Izy, Izay tsy hamela na oviana na oviana ny marina ho menatra (Joe. 2:27).
Ny bokin’i Joela dia mifarana amin’ny fahitana mampiseho tontolo anankiray voaova ka eo afovoan’i Jerosalema Vaovao dia misy ony mikoriana, dia ny fanatrehan’Ilay Andriamanitra mandrakizay eo amin’ny vahoakany voavela heloka izany (Joe. 4:18-21).
Io hafatra ara-paminaniana io dia mampirisika antsika handeha ao amin’ny Fanahy, hanohy hiaina ny fiainana kristianina amin’ny fo manontolo ary hitaona ireo rehetra tsy mbola niantso ny anaran’i Kristy. Rehefa manao izany isika, dia mitaky ny teny fikasana avy any ambony mikasika ny fanatrehan’i Kristy mitoetra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izay mitoetra ao am-pon’ny olony mahatoky.
“Tsy maintsy mahalala ny tena toetrantsika isika, raha tsy izany dia tsy ho tsapantsika ny maha-ilaina ny fanampian’i Kristy. Tsy maintsy fantatsika ny loza hihatra amintsika, raha tsy izany dia tsy handositra any amin’ny fialofana isika. Tsy maintsy tsapantsika ny fangirifirian’ny ratrantsika, raha tsy izany dia tsy haniry ny fanasitranana isika.” — HF, t. 131. Ahoana no fahalalanao ny “tena toetranao marina”? Inona no fahoriana iaretanao? Efa nandramanao ve ny nankao amin’ilay “fialofana” ampanantenaina antsika ao amin’i Kristy?